ပုသိမျတဖကျကမျးမှ သတငျးပေးဆိုသူ ကွံ့ခိုငျဖှံ့ဖွိုးရေး ပါတီဝငျ တဈဦး သနေတျပဈခံရ – Network Media Group
ဧရာဝတီတိုငျး ဒသေကွီး၊ ပုသိမျမွို့၊ တဈဖကျကမျးတှငျ နထေိုငျသညျ့ သတငျးပေးအဖွဈ လူသိမြားသူ အသကျ ၅၈ နှဈရှိ ဦးကြျောသိနျးထှနျး ဆိုသူမှာ သနေတျဖွငျ့ ပဈခတျခံရ၍ ဒဏျရာ ရာရှိသှားကွောငျး ဒသေခံမြားကသညျ။
ပုသိမျးတဖကျကမျး အမှတျ ၁၀ ရပျကှကျ၊ စံပွလမျးနအေိမျထဲမှ သနေတျသံ ၃ ခကျြကွား၍ သှားကွညျ့ရာ ဦးကြျောသိနျးထှနျးမှာ သှေးအိုငျထဲတှငျ လဲနေ ကွောငျး စဈကားမြားနှငျ့ လူနာတငျကား ရောကျလာပွီး စဈဆေးရုံသို့ ချေါသှားကွောငျး ရပျကှကျ အတှငျးနထေိုငျသညျ့ မကျြမွငျတှရှေိ့သူ အခြို့က ပွောသညျ။
“ဒဏျရာက ခေါငျးတဈခကျြ ရှပျထိပွီး ပေါငျတဈခကျြထိတယျ။ CCTV မှတျတမျးအရ ပဈတဲ့သူက ဒသေခံထဲက မဟုတျဘူး။ လူစိမျး ဧညျ့သညျတှကေို စဈတပျက ပိတျဆို့ စဈဆေး စုံစမျးနတေယျ” အုပျခြုပျရေး အဖှဲ့ဝငျတဈဦးက ပွောသညျ။
ဦးကြျောသိနျးထှနျးကို ၎င်းငျး၏ နအေိမျအတှငျး စကျတငျဘာ ၂၃ ရကျနေ့ ညနေ ၅ နာရီ အခြိနျခနျ့က အမညျမသိ သနေတျသမားက လကျရောကျပဈခတျခဲ့ခွငျး ဖွဈကွောငျး CCTV မှတျတမျးမြားအရ သိရသညျဟု ဆိုသညျ။
၎င်းငျးသညျ ယခငျစဈအစိုးရ ခတျေဖွဈသညျ့ နိုငျငံတျော ငွိမျဝပျပိပွားမှုတညျဆောကျရေးအဖှဲ့(နဝတ) ခတျေကတညျး က သတငျးပေးတဈဦး အဖွဈ လူပွောမြားခဲ့ပွီး မောကျမာသူ ဖွဈကွောငျး အာ ဏာရှငျ ဆနျ့ကငျြ ဆန်ဒပွသူ၊ မပွသူ မညျသူကို မဆို ၎င်းငျးနှငျ့ အဆငျမပွသေူ အခြို့အား သတငျးပေးသဖွငျ့ အဖမျး ခံရသူမြား ရှိနသေညျ့အပွငျ ထှကျပွေး တိမျးရှောငျနရေသူမြားလညျး ရှိနကွေောငျး ရပျကှကျ အတှငျး နထေိုငျသူ အခြို့က ပွောသညျ။
ထို့အပွငျ ဦးကြျောသိနျးထှနျးသညျ ပုသိမျမွို့နယျ ပွညျထောငျစု ကွံ့ခိုငျရေးနငျ့ဖှံ့ဖွိုးရေးပါတီ၏ မွို့နယျ စညျးရုံး ရေးမှူး ဖွဈကာ စှမျးအားရှငျအဖှဲ့ တှငျပါဝငျပွီး၊ (မဘသ) အဖှဲ့၏ ဆန်ဒပွပှဲမြား၊ နှဦေးတျောလှနျရေး အစပိုငျးကာလ တပျထောကျခံသညျ့ တနျပွနျဆန်ဒပွပှဲမြားကို ဦးဆောငျခဲ့သူ တဈဦးဖွဈကွောငျး သိရသညျ။
“ကြျောသိနျးထှနျး က စဈတပျရဲ့အမာခံ ဒလနျဆိုတာ ဒသေခံတှစေီက အတိအကြ သတငျးအရ သုတျသငျ ရှငျး လငျးခဲ့တာလို့ သတငျး ထုတျပွနျထားတယျ” ဟု ပုသိမျ အနောကျ ကာကှယျရေးတပျဖှဲ့ P.W. D.F ၏ အှနျလိုငျးမှ သတငျးထုတျပွနျခကျြကို ကိုကား၍ မွို့ခံ ဦးတငျဝငျး က ပွောဆိုသညျ။
ဧရာဝတီတိုငျးတှငျ စဈကောငျစီသတငျးပေး (ဒလနျ) ဟု နာမညျကွီးနသေူမြားကို သနေတျဖွငျ့ ပဈခံရမှုမြားရှိ နပွေီး ယခု ပုသိမျမွို့က ပဈခတျမှုမှာ ၅ ကွိမျမွောကျဖွဈကွောငျး သိရသညျ။
ထိုသို့သော ပဈခတျမှုမြားကွောငျ့ သဆေုံး သူ ၂ ဦး၊ ဒဏျရာသူ ၃ ဦး ရှိပွီဟု ဒသေခံမြားက ဆိုသညျ။
ဩဂုတျလ ၂၉ ရကျနကေ့ ကနျကွီးထောငျ့မွို့မှ စဈကောငျစီသတငျးပေး “ဒလနျ” ဟုဆိုကာ သနေတျပဈခံရ၍ သဆေုံးခဲ့သူ ဦးမောငျမောငျမွငျ့ ကလညျး ပွညျထောငျစု ကွံ့ခိုငျရေးနှငျ့ ဖှံ့ဖွိုးရေးပါတီ USDP ၏ မွို့နယျစညျးရုံး မှူး တဈဦးဖွဈသညျ။
ပုသိမ်တဖက်ကမ်းမှ သတင်းပေးဆိုသူ ကြံ့ခိုင်ဖွံ့ဖြိုးရေး ပါတီဝင် တစ်ဦး သေနတ်ပစ်ခံရ
ဧရာဝတီတိုင်း ဒေသကြီး၊ ပုသိမ်မြို့၊ တစ်ဖက်ကမ်းတွင် နေထိုင်သည့် သတင်းပေးအဖြစ် လူသိများသူ အသက် ၅၈ နှစ်ရှိ ဦးကျော်သိန်းထွန်း ဆိုသူမှာ သေနတ်ဖြင့် ပစ်ခတ်ခံရ၍ ဒဏ်ရာ ရာရှိသွားကြောင်း ဒေသခံများ က သည်။
ပုသိမ်းတဖက်ကမ်း အမှတ် ၁၀ ရပ်ကွက်၊ စံပြလမ်းနေအိမ်ထဲမှ သေနတ်သံ ၃ ချက်ကြား၍ သွားကြည့်ရာ ဦးကျော်သိန်းထွန်းမှာ သွေးအိုင်ထဲတွင် လဲနေ ကြောင်း စစ်ကားများနှင့် လူနာတင်ကား ရောက်လာပြီး စစ်ဆေးရုံသို့ ခေါ်သွားကြောင်း ရပ်ကွက် အတွင်းနေ ထိုင်သည့် မျက်မြင်တွေ့ရှိသူ အချို့က ပြောသည်။
“ဒဏ်ရာက ခေါင်းတစ်ချက် ရှပ်ထိပြီး ပေါင်တစ်ချက်ထိတယ်။ CCTV မှတ်တမ်းအရ ပစ်တဲ့သူက ဒေသခံထဲက မဟုတ်ဘူး။ လူစိမ်း ဧည့်သည်တွေကို စစ်တပ်က ပိတ်ဆို့ စစ်ဆေး စုံစမ်းနေတယ်” အုပ်ချုပ်ရေး အဖွဲ့ဝင် တစ်ဦး က ပြောသည်။
ဦးကျော်သိန်းထွန်းကို ၎င်း၏ နေအိမ်အတွင်း စက်တင်ဘာ ၂၃ ရက်နေ့ ညနေ ၅ နာရီ အချိန်ခန့်က အမည်မသိ သေနတ်သမားက လက်ရောက်ပစ်ခတ်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်ကြောင်း CCTV မှတ်တမ်းများအရ သိရသည်ဟု ဆိုသည်။
၎င်းသည် ယခင်စစ်အစိုးရ ခေတ်ဖြစ်သည့် နိုင်ငံတော် ငြိမ်ဝပ်ပိပြားမှုတည်ဆောက်ရေးအဖွဲ့(နဝတ) ခေတ်ကတည်း က သတင်းပေးတစ်ဦး အဖြစ် လူပြောများခဲ့ပြီး မောက်မာသူ ဖြစ်ကြောင်း အာ ဏာရှင် ဆန့်ကျင် ဆန္ဒပြသူ၊ မပြသူ မည်သူကို မဆို ၎င်းနှင့် အဆင်မပြေသူ အချို့အား သတင်းပေးသဖြင့် အဖမ်း ခံရသူများ ရှိနေသည့်အပြင် ထွက်ပြေး တိမ်းရှောင်နေရသူများလည်း ရှိနေကြောင်း ရပ်ကွက် အတွင်း နေထိုင်သူ အချို့က ပြောသည်။
ထို့အပြင် ဦးကျော်သိန်းထွန်းသည် ပုသိမ်မြို့နယ် ပြည်ထောင်စု ကြံ့ခိုင်ရေးနင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ၏ မြို့နယ် စည်းရုံး ရေးမှူး ဖြစ်ကာ စွမ်းအားရှင်အဖွဲ့ တွင်ပါဝင်ပြီး၊ (မဘသ) အဖွဲ့၏ ဆန္ဒပြပွဲများ၊ နွေဦးတော်လှန်ရေး အစပိုင်း ကာ လ တပ်ထောက်ခံသည့် တန်ပြန်ဆန္ဒပြပွဲများကို ဦးဆောင်ခဲ့သူ တစ်ဦးဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
“ကျော်သိန်းထွန်း က စစ်တပ်ရဲ့အမာခံ ဒလန်ဆိုတာ ဒေသခံတွေစီက အတိအကျ သတင်းအရ သုတ်သင် ရှင်း လင်းခဲ့တာလို့ သတင်း ထုတ်ပြန်ထားတယ်” ဟု ပုသိမ် အနောက် ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ P.W. D.F ၏ အွန်လိုင်းမှ သတင်းထုတ်ပြန်ချက်ကို ကိုကား၍ မြို့ခံ ဦးတင်ဝင်း က ပြောဆိုသည်။
ဧရာဝတီတိုင်းတွင် စစ်ကောင်စီသတင်းပေး (ဒလန်) ဟု နာမည်ကြီးနေသူများကို သေနတ်ဖြင့် ပစ်ခံရမှုများရှိ နေပြီး ယခု ပုသိမ်မြို့က ပစ်ခတ်မှုမှာ ၅ ကြိမ်မြောက်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
ထိုသို့သော ပစ်ခတ်မှုများကြောင့် သေဆုံး သူ ၂ ဦး၊ ဒဏ်ရာသူ ၃ ဦး ရှိပြီဟု ဒေသခံများက ဆိုသည်။
ဩဂုတ်လ ၂၉ ရက်နေ့က ကန်ကြီးထောင့်မြို့မှ စစ်ကောင်စီသတင်းပေး “ဒလန်” ဟုဆိုကာ သေနတ်ပစ်ခံရ၍ သေဆုံးခဲ့သူ ဦးမောင်မောင်မြင့် ကလည်း ပြည်ထောင်စု ကြံ့ခိုင်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ USDP ၏ မြို့နယ်စည်းရုံး မှူး တစ်ဦးဖြစ်သည်။